Sawirka Sawirka: istock / Media Extreme
Dhammaantood waxay ku bilaabmeen fikrad geesinimo leh, ayuu yidhi Paul Schroeder, oo ah madaxa shirkadda HOURCAR, Macaash wadaagga baabuurta ee Minnesota.
"Fikradda Weyn," sida Schroeder ugu yeeray 2017, waxay ku lug lahayd adeegga wadaagga baabuurta oo dhan iyo shabakad xarumo koronto lagu shubo oo laga heli doono bulshooyinka taariikh ahaan aan la maalgelin ee ku yaal magaalooyinka Mataanaha ah. Kaliya afar sano kadib, fikradan ayaa run noqonaysa - the Shabakada EV Spot. Wadashaqeyn ka dhaxeysa HOURCAR, Xcel Energy, iyo magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis, ayaa qorshahan waxaa lagu daahfuri doonaa raxan ka kooban 150 gawaarida korontada la wadaago ah (EVs) iyadoo lagu rakibayo 70 xarumood oo lacag lagu shito waddooyinka magaalada guga.
2018, Machadka McKnight wuxuu deeq $25,000 ah siiyay HOURCAR si loo horumariyo qorshe ganacsi ee mashruuca. Brendon Slotterback, sarkaalka barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta, ayaa markii hore shaki qabay. "Waxaan xasuustaa inaan u maleynayay inay aheyd wax xiiso leh laakiin waxaan halis weyn ugu jiray fashil," ayuu yiri Slotterback. Ugu dambeyntiina, waxaan go’aansanay inaan fursad qaadanno oo aan abuurno iniinyaha. Aad ayaan ugu faraxsanahay markaan aragnay inay midho aan caadi aheyn maanta soo baxayaan. ”
Maaddaama mashruucu ka soo gudbay tallaal dheer oo loo qaaday wax la hubo, McKnight wuxuu bixiyay maaliyad dheeri ah oo loogu talagalay dhisidda iyo bilaabista. Dhawaanahan, rubuc-koodii koowaad ee deeq-bixinta 2021, kooxda Midwest Cimilada & Tamarta, oo ka tarjumaysay muhiimadda ay leedahay in fursad laga helo fikradaha waaweyn, ayaa la siiyay HOURCAR $500,000 guud ahaan taageerada hawlgalka muddo laba sano ah.
HOURCAR waxay dadka ku xiraa beeshooda iyadoo la raacayo gaadiid noocyo kala duwan leh oo ku habboon, sinnaan leh, oo waara. Astaanta Sawirka: HOURCAR
Waqtigu Waa Wax Walba
Laga soo bilaabo 2012, HOURCAR waxay ahayd adeegga kaliya ee wadaagga baabuurta ee Twin Cities oo leh xarumo ku yaal xaafadaha dakhligoodu hooseeyo, oo ay ku jiraan Phillips ee Minneapolis, iyo Frogtown iyo Midway-Hamline ee St. Paul. Shaqaalaha HOURCAR waxay abuurayaan xiriirro lala yeesho hoggaamiyeyaasha bulshada, bixiyeyaasha adeegga bulshada, iyo ururrada maxalliga ah si loo dejiyo qaab-dhismeedyo xubinnimo oo loo wada dhan yahay oo la heli karo iyo jadwalka ujrada.
Fikradda ah in la dhiso dhan-koronto isku xirka gawaarida ee meelaha aan sugneyn ee iswaafajiyay ka go'an HOURCAR ee ku aaddan helitaanka gaadiid loo simanyahay aasaaskeeda waaxda deegaanka. Waxay xariirtay xiriirada qotada dheer ee xubnaha shaqaalaha la-hawlgalayaasha bulshada waxayna nasiib ku yeelatay jahawareer bulsho oo lama filaan ah oo ku wajahan EVs.
"Waqtigu waa wax walba," ayuu yiri Schroeder. Soo-jeedinteennu waxay soo baxday aragtida xilligii EV-gu ay u muuqdeen sida gaari-golf sharaf leh oo loo wareejiyay Teslas. Waxaa jiray dareen lama filaan ah oo la wareegida EV ay ku haysay geeska. ”
Bulshooyinka ayaa Hormuud u ah
Xcel Energy wuxuu lahaa aragti isku mid ah. Sannadkii 2017-kii, shirkadda yutiilitiga waxay billaabeen wadahadallo lala yeesho maamuleyaasha si loo ballaariyo marin u helidda EV-ga ee gobolka oo dhan. Waxay ku abaal marisay $25,000 HOURCAR si ay u horumariso soo jeedin, wadar ah in McKnight uu markii dambe iswaafajiyay.
HOURCAR waxay isticmaashay lacagtii ugu horaysay si ay ugu diyaariso qorshe dhamaystiran shabakada EV, oo ka kooban kaabayaasha, teknolojiyadda, maalgalinta, howlaha, iyo saamaynta bulshada. Waxay shaqaalaysiisay Shannon Crabtree inay noqoto isku-duwaha wacyigelinta bulshada si ay uga qaybgasho xubnaha bulshada howlaha qaabeynta.
"Waxaan ka codsanay bulshada inay hoggaanka qabtaan," ayay tiri. “Waxaan siinay taageero iyo maalgelin ururada aasaasiga ah ee deegaanka - laga soo bilaabo golayaasha degmada ilaa dukaamada baaskiillada ee xaafadda - si loo horumariyo hab lagula falgalo dadka deggan. Ma dooneyn inaan qoro nidaamka. Waxaan dooneynay inay la jaanqaado baahiyaha iyo qiyamka beel walba. ”
Shabakadda 'EV Spot Network', oo ah adeeg wadaagga baabuurta oo dhan-koronto ah iyo shabakad xarumo koronto lagu xirayo, ayaa laga heli doonaa bulshooyinka aan la maal-gelin ee ku teedsan Magaalooyinka Mataanaha ah gugan-taas oo ka dhigaysa gaadiidka mid la heli karo oo caddaalad ah.
Xaafadaha St. Paul waxaa ka mid ahaa West Side, North End, Frogtown, iyo Dayton's Bluff. Xaafadaha Minneapolis waxaa ka mid ahaa North, Powderhorn, Phillips, iyo Cedar-Riverside. In kasta oo geeddi-socod kastaa ka duwanaa, haddana mawduucyo isku mid ah ayaa soo baxay.
Dadku waxay doonayeen is-beddel dabacsan oo deg-deg ah iyo oggolaansho, qiimeyn la awoodi karo, tarjumaadda qalabka luqado kala duwan, iyo barnaamij wada-wadaag si loogu xiro kuwa horayba u waday iyo kuwa u baahan raacitaan.
"Waxaa jira caqabado nidaamsan oo soo gala," ayuu yiri Crabtree. “Tusaale ahaan, dadka qaarkii ma haystaan laysanka darawalnimada ama waxay lumisay xuquuqdooda mid, awoodna u lahaanshahoodu waa mid shaqsiyeed. Ma xallin karno dhammaan caqabadaha, laakiin hadda waxaan ogaanay waxa ay yihiin - ma qiyaaseyno. Waxaana jira waxyaabo badan oo aan ku shaqeyn karno marka aan ka soo degno dhulka. ”
HOURCAR waxay cusbooneysiisay nidaamkeeda si ay ugu oggolaato inta badan isticmaaleyaasha cusub 24 saac gudahood, waxay yareyneysaa qarashka xubinnimada boqolkiiba 40, waxayna bixisaa tarjumaad luqadeed. Barnaamijka wadaagista wadaagga bulshada ayaa ku jira horumar.
- Waa fikrad fudud, oo caqabado xagga tiknoolajiyada ahi aad u ballaadhan yihiin, ayuu yidhi Crabtree. Haddii aan dhibaato ku xallin karno tiknoolajiyada, si kastaba ha noqotee, waxay si weyn u horumarin doontaa sinnaanta. Uma baahnid inaad u baahan tahay liisanka darawalnimada si aad u isticmaasho adeegga, maadaama qof kale uu wadi karo, dadkuna ay wadaagi karaan kharashka. ”
Inbadan oo EV ah Wadooyinka
Maalgashiga geedi socodka qorshaynta bulshada ee wadajirka ah ayaa la bixiyay. Magaalooyinku waxay ku yimaadeen markabka, iyo sidoo kale Metropolitan Council iyo Waaxda Tamarta ee Mareykanka. $50,000 ee maalgelinta abuurka ee ka kala yimid Xcel iyo McKnight waxay horseedday $12 milyan oo raasumaal gaar ah iyo maalgashi dadweyne-kaas oo dhowaan ay ka muuqan doonaan raxan EV ah jidadka Twin Cities.
"Waxay muujineysaa awoodda maalgashi ee toogasho dheer," ayuu yiri Schroeder. “Waxaan haysannay fikrad wanaagsan waqtiga saxda ah, waxaanan la yeelanay lamaanayaal cajaa’ib leh, min Xcel iyo McKnight ilaa St. Paul iyo Minneapolis iyo xubnaha bulshada. Qof kastaa wuxuu nagula kulmay xiisaha, dabacsanaanta, iyo rabitaanka tijaabinta. Wadajir ayaan uga soo wareejinnay halista sare una gudubnay abaalmarin sare. ”
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest